Ithenda ye-Uterine enye yeengxaki eziqhelekileyo zokukhulelwa. Phantse wonke umama wesikhathi esizayo, ubuncinane kanye kwiiveki ezingama-40 ekulindeni ummangaliso, weva ixesha elifanayo kumgqirha wakhe.
Nangona kunjalo, le yimeko eyingozi kakhulu, ngoko makhe sibone oko kubangela ukuba ithoni yentsholongwane ngexesha lokukhulelwa.
Kwi-trimester yokuqala yokukhulelwa, itoni ye-uterine eyandisiweyo ingakhokelela ekuphumuleni okanye ekubanjweni kombindi ekuphuhlisweni, kwaye kwimeko yesibini neyesithathu elandelayo emva kokukhipha isisu kunye nokuzalwa kwangaphambi kokuzalwa. Ukongezelela, le meko ibangela umsebenzi we-placenta ukubonelela nge-blood embryo, ehlanjululwa yi-oksijeni ye-oksijini yindlala yemvumba. Ukuqhekeka kwesibeletho ngeetoni ezingakhokelela ekunciphiseni okufanayo kwi-placenta yimbangela eqhelekileyo yenkampani yokugqibela. Yingakho kungabikho nto kufuneka siyihoye iimpawu eziphazamisayo.
Uxinzelelo lwentliziyo lubonakaliswa ngokudweba ubuhlungu kwiintlobo, ezikhumbuza kakhulu iimvakalelo ngexesha lokuya esikhathini. Abasetyhini, abasele benabantwana, baqaphele ukufana kweentlungu ezinjalo kwiimbambano zokuqala. Ixesha elizayo umama uziva ubunzima kunye noxinzelelo kwisisu esisezantsi, uthatha umva osezantsi, kukho ukuvakalelwa kwengcinezelo eninzi kwindawo ye-pubic. Ukudibanisa ngokukodwa ingozi yeempawu ezilapha ngasentla kunye nokukhutshwa kwamanzi okuphuma kwinqanaba lomzimba. Zonke ezi zihlandlo zokutyelela ngokukhawulezileyo ekuboniswaneni kwabasetyhini.
Ufunyaniswe ngokusongela inkqubo yokukhulelwa kwimeko ngokusebenzisa uviwo oluqhelekileyo logqirha okanye ngoncedo lwedata efunyenwe yi-ultrasound. U kunyango lwendabuko kukugcinwa kokulala nokuphumla, ukusetyenziswa kwezinto zokudambisa kunye ne-antispasmodics kunye nokubonelelwa komama wamasa ukuphumla.
Nangona kunjalo, ngokuqhelekileyo ithoni ibonisa ezinye zeengxaki zempilo. Ngoko ke, ukuba unyango olungakumbi luyimfuneko ukuchonga ingcinezelo.
Izizathu zokunyuka kwesifo kwi-ithrekhi yesisu ngexesha lokukhulelwa zihluke kakhulu kwaye ziyakunikwa kuphela ugqirha.
Ngoko, ngokuqhelekileyo uxinzelelo lwengqondo luyimiphumo yezifo ezahlukahlukeneyo kunye nezifo kwi-pelvic. Yingakho icebo lokukhulelwa kubaluleke kakhulu. Kulula kakhulu kwaye kuphephe ukuphelisa zonke izifo ezisongela impilo yengane ezayo, nangaphambi kokuzala kwakhe. Lo ngumqondiso omkhulu wendlela eyaziwayo kunye nengqiqo ebomini.
Ukukhulelwa kwesisu kwangaphambili kunokubangela utshintsho oluthile kwisakhiwo sesisu kwaye kubangele ukungasebenzi kwimisebenzi yalo ngexesha lokukhulelwa komntwana oyifunayo.
Iziphazamiso zeHormonal, ingakumbi kwinkqubo ye-endocrine, ngokuqhelekileyo ibangela ukuba uxinzelelo lwengqondo. Oku kusebenza nakwii-hormone zesini ezithandwayo kumfazi okhulelweyo ohlangabezana neengxaki ngendlela yokungasebenzi kwemisebenzi ye-ovari, i-adrenal glands okanye i-placenta.
Izifo ezivumelanisiweyo zomama olindelekileyo zisoloko zisisongelo ekuthwaleni umntwana. Ngokomzekelo, ezinye iintliziyo ezingapheliyo nezifo zengqondo zifuna ingqalelo ekhethekileyo ngexesha lokukhulelwa. Ngonyango olufanelekileyo, iingxaki ezinzima zingagwenywa kwaye umntwana unikwe ingxelo kwiiiveki ezimashumi amane.
Cishe phantse zonke iimeko, ukungabikho komntwana okwebuntwaneni kwisakhiwo nokuphuhliswa kwesibeleko kubangelwa ukwanda kwetoni ngexesha lokukhulelwa. Oku kuthiwa yi-infantilism yesisu nayo ingabonwa yile nkalo, ebonakalisa ngendlela yokuphuhliswa kwezitho zobulili kwintombi.
Iifom ehlukahlukeneyo kwi-uterine, i-fibroids kunye ne-polyps ziyakwazi ukukhusela ukukhulelwa ngokwazo kwaye zibe yingxaki enkulu kwixesha lokukhulelwa.
Ngokwahlukileyo kuyimfuneko ukuxelela kwingxoxo eya kubangela ngexesha lokukhulelwa ithoni yesibindi ngesimo sengqondo esingakhululekiyo. Ayikho imfihlo yokuba umama ozayo kufuneka akhuselwe ekuxinekeni nasekuxhaseni. Emva kwayo yonke ixesha ngeli xesha le ntokazi ngenxa yokuhlelwa kabusha kwe-hormonal i-hormonal i-vulnerable and is sensitive to many factors. Naluphina imeko engabalulekanga, engayi kuyenza ingqalelo phambi kwayo, ngoku ingaba yinto enokubangela ukuba iinyembezi zenzeke okanye zidideke. Ukungakhuselekanga, uxinzelelo lwangaphakathi, ukuxinezeleka - konke oku akuyona ndlela efanelekileyo yokuchaphazela ukukhulelwa kwaye kunokudala i-hypertonia. Ngaphezu koko, iimeko ezichazweyo ziyabulala emntwaneni, kungekhona nje ngexesha lokuphila kwangaphakathi, kodwa neenyanga ezimbalwa ngaphambili. Oko kukuthi, sele sele uhleli ngexesha lokucwangcisa umntwana ofunayo, kufuneka uhlawulwe ngemvakalelo emihle kwaye ulahle iingcamango ezingalunganga.
Isiphumo esifanelekanga kakhulu sinokunika kunye nokudandatheka okuqhelekileyo kwe-immunity. Yingakho bonke abafazi abakhulelweyo baboniswa bedla imifuno eninzi kunye neziqhamo, kunye nokuthatha ii-vitamin complexes.
Phakathi kwezona zizathu eziqhelekileyo zetoni ye-uterine, kunokwenzeka ukuba ukuhlukanisa kwakhona i-isthmico-incervical failure. Inkxalabo enzima kakhulu ibonakaliswe ukungakwazi komlomo wesibeleko ukujamelana nokunyuka komzimba komntwana, ngaphandle kokuba unyango olufanelekileyo lukhokelela ekuvezeni kwakhe ixesha elide ngaphambi komhla ofunekayo. Yaye ukugcina umntwana oswelekile, ngelanga, akunakwenzeka kuzo zonke iimeko.
Kucacile ukuba, ngexesha lokukhulelwa, ingqalelo ekhethekileyo kufuneka ihlawulwe ekuthintekeni kokuqala kwe tonus. Ngoko, kwisigaba sokucwangcisa umntwana kubalulekile ukuba uhlolisise ngokupheleleyo ukufumaneka kwezifo kunye neZPP. Ukongezelela, kubalulekile ukubonisana neengcali ezifana ne-gynecologist, i-endocrinologist kwaye, ukuba kuyimfuneko, tyelela isifo sengqondo.
Ukuba sele uhamba phantsi kwentliziyo yentsana, zibonelele ngokukhusela ukusebenza kunye nezimo zokuphumla, ulawule ukukhithwa kwezinto ezingokwenyama nangokwengqondo, ukuqonda izinto ezisisiseko, oko kuyimfuneko ngexesha lokukhulelwa, iindlela zokuphumla kunye nokuphulaphula ngokucophelela imeko yakho. Ngethuba elincinci lokunyuka kwetterine, thelana nodokotela ngokukhawuleza. Impilo yengane ayikho into enelungelo lokuthatha ingozi.
Izifo zichaphazeleka njani ngokukhulelwa?
Ukhawuleza kangakanani ukukhulelwa umntwana?
Xa kunokwenzeka ukuba uqhelane nendoda ngobuhlobo obunzulu?
Kutheni kubakho iimbambo zakho?
Indlela yokukhetha ibhatyi naluphi na uhlobo: imiqathango ye-3 yonke
Ukuphikisana rhoqo kunye nokuphazamisana nomfana
Ukuphuhliswa kwintsana ngonyaka ongu-1 wobomi
Ukukhulelwa kwe-Ectopic kunye neempawu zayo